Ụbọchị My Pet » 3 Atụmatụ kee Best Online dịwara Profaịlụ
3 Atụmatụ kee Best Online dịwara Profaịlụ
Ịtọlite ​​a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ online pụrụ inwe ma onye exiting na a na-emenye ụjọ echiche niile ozugbo. The mkpali doro anya na-abịa site n'echiche bụ na ma eleghị anya, ị dị nnọọ pụrụ izute ahụ pụrụ iche na mmadụ site yiri ókè-na internet. The ụjọ na-abịa site echiche nke na-eche ihe na-etinye n'ime profaịlụ gị. Ọ bụrụ na ị dị ka ọtụtụ ndị na-, eleghị anya ị chọrọ tinye n'ihu ndị kasị mma nnọchiteanya nke onwe gị, ma nnọọ na ị na-amaghị otú e si eme na. Na-akọwa onwe gị nwere ike ihere na mgbagwoju anya. Ezie na ọ pụrụ iyi a bit dị ka-ede a cover leta a ọrụ ngwa, nke bụ eziokwu bụ na ị na-n'ezie na-agbalị sere na nwere ụbọchị-ọ bụghị nwere bosses! N'ihi na nke mgbagwoju nke na-eke ihe online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ, e nwere n'ezie ọtụtụ ụlọ ọrụ mbọ iji otu nzube-nke na-ede internet mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ. Dabara nke ọma, E nwere ọtụtụ ụzọ na ị pụrụ ime ka gị onwe gị na profaịlụ / "banyere m" ngalaba ọzọ na-akpali akpali, -enweghị na-akwụ ụgwọ a "ọkachamara" na-eme ya n'ihi na ị.
Gwa Akụkọ: Ikekwe otu n'ime ihe ndị kasị mkpa profaịlụ-ede Atụmatụ icheta, na-akọ akụkọ na profaịlụ gị bụ maa a nwapụtaworo na ụzọ ka ndị mmadụ na a ọchịchọ dịkarịa ala ga-esi mara ihe banyere gị. Nkwupụta dị otú ahụ dị ka "m a mma, fun, adventurous Ihọd "bụ ọnyà na n'ezie na-ekpughe nnọọ nta banyere onye. Otú ọ dị, ị na-ahọrọ na-enye a mkpirikpi anecdote na-anọchite anya onye ọ bụla n'ime ndị na nkọwa ga-eme ka ị budata ọzọ kwesịrị ncheta na-akpali. (Ọmụmaatụ, "Otu oge mgbe n'ime ime obodo Ghana ..."). N'ezie, ọ bụ isi na ị na-ndị a akụkọ nkenke; ọ bụghị nanị na nke a ga-na-na profaịlụ gị mfe ogugu, ma ọ nwere ike na-enye ohere magburu onwe maka a mkparịta ụka isiokwu gị ụbọchị ("... Ya mere ịgwa ndị ọzọ banyere oge ahụ unu ..."). Ụzọ ọzọ na-eme nke a bụ iji nye kpọmkwem ihe atụ maka mfe jenerik okwu. Dị ka ọmụmaatụ, na-asị "Otu ụbọchị m pụrụ ọbụna ime ka i mbinye aka m BBQ ọgịrịga na coleslaw" bụ ihe kwesịrị ncheta na personable karịa sị, "M n'ezie amasị esi nri n'èzí na m imi."
Òkù Ajụjụ: A eke sochie mbụ mgbe, jide n'aka na gị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-enye ohere maka profaịlụ ndị ọzọ na-arịọ gị ajụjụ. Ma kwuru kpọmkwem na (dị ka, "Alala ịjụ m ihe banyere ...") ma ọ bụ nanị subtly echiche, a profaịlụ na-akpọ ase n'ime kpọmkwem nkọwa banyere gị na-egosi na ị bụ onye na-emeghe, ịkpọ onye dị ka nke ọma. Yabụ, ma ọ bụrụ na ụdị na profaịlụ gị e dere na-ada n'ụzọ zuru okè zuru ezu ma na-emechi anya, mgbe ahụ ndị ọzọ nwere ike iche na ọ bụ otú ahụ na ị bụ kwa. Nọgidenụ na-mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nhọrọ oghe etiri dị ka onye na-emeghe, ịkpọ onye onwe gị.
-Eme Ihe n'Eziokwu: N'ikpeazụ, ime ihe n'eziokwu na o doro anya na a isi mgwa ọ bụla ịga nke ọma mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ahụmahụ, ma online ma ọ bụ. Ọ bụrụ na gị na profaịlụ e dere ihe dị otú ahụ dị ka ikwubiga okwu ókè banyere ahụmahụ ma ọ bụ "nka" na-nanị abụchaghị eziokwu nke eziokwu, ndị ọzọ ị na-elele profaịlụ gị ga-eleghị anya ike ịgwa mee elu mee ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Emeghị nkwurịta okwu bụ mgbe a ọma ụkwụ na-amalite oyi na. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ọ dị oké mkpa ka ị na-enye juru ngosi banyere niile nke gị ọmụmụ na akụ online ma. Dị ka ọmụmaatụ, achọghịzi ekpughe gị ugbu a na-arụ n'ihi na egwu na-atụ ndị ọzọ na-achọ ka ụbọchị gị nanị n'ihi na gị ego bụ ezi ihe mere naanị ala, "Na ọgwụ ubi" kama "orthopedic dọkịta na-awa" na onye nkọwa. N'okwu a, ọ dịghị mgbalị e mere iji mee ka onye ị bụ ụda "mma" karịa eziokwu.
M Lee onye na-amasị m – Ugbu a, ihe?
10 Mere nwamba karịrị enyi nwoke